Talaado, Jan 12, 2021-Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay muqaalka ciidamo dhawaan lagu soo bandhigay Duleedka Muqdisho – LaacibOnline
Talaado, Jan 12, 2021-Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay muqaalka ciidamo dhawaan lagu soo bandhigay Duleedka Muqdisho
Talaado Janaayo,12, 2021 (HOL) – Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay ciidamo hubeysan oo muqaalkooda lagu baahiyay baraha Bulshada kuwaas oo la sheegayay in loo diyaariyay ka hortaga doorasho aan wada ogol aheyn oo ka dhacda Dalka.Wasiir ku xigeenka wassaaradda warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-cadaala oo soo saaray qoraal uu kaga hadlaayo iney waxba kama jiraan tahay ciidamada la sheegay iney kasoo horjeedaan doorashada ay ku dhawaaqday Xukuumadda Soomaaliya.”Muqaalka maalmahaan la wareejinayay ee lagu sheegay ciidamo kasoo horjeeda doorashada waa been abuur aan sal iyo raad toona laheyn mana ahan muqaalo hadda la duubay ciidamada muqaalka ka muuqdana ma aha kuwa falaago ah” ayuu yiri wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-cadaala.
Talaado, Janaayo, 12, 2021 (HOL) – Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta-gareen ayaa dib ugu laabtay magaalada Baydhabo kaddib kulan uu uga qeybgalay magaalada Muqdisho.
Talaado Janaayo,12, 2021 (HOL) – Sarkaal katirsanaa Al-shabaab oo lagu magacaabo Cabdulfatah Abu bakar Abdi oo loo yaqaano Mousa al Muhajir oo ay wehliyaan 20 kamid ah dagaalyahanadiisa, ayaa wararku sheegayaan inuu ku biirayo ISIS.
Talaado Janaayo,12, 2021 (HOL) – Qaramada Midoobay ayaa ka digtay xaaladaha siyaasadeed ee ka jira dalka Uganda xilli walaac laga muujinayo suurtagalnimada in la helo doorashooyin baarlamaan iyo madaxtinimo oo xor iyo xalaal ah dabayaaqada toddobaadkan.
Talaado, Janaayo, 12 2021 (HOL) – Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in qarax lala eegtay gaari ay la socdeen ciidamo Kenyaan ah oo marayay deegaanka lagu magacaabo Husungoow.
← Talaado, Jan 12, 2021-Madaxweyne QoorQoor ” dalka kama dhici doonto doorasho ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland
Nova Scotia sets stage for economic recovery with increased levels of immigration →
Khamiis, Nov 5 , 2020-Hay’adda INTERSOS oo ku dhawaaqday inay 28 sano kadib xirayso howlgalkeedii Soomaaliya